मार्केट – Page2– Lokpati.com
नेकपा प्रधानमन्त्री चितवन नेपाली काँग्रेस पक्राउ अमेरिका प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अपराध राशिफल केपी शर्मा ओली नेपाल प्रहरी मृत्यु सरकार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड
छ महिनाको मूल्यवृद्धि कति प्रतिशतले बढ्यो ?
काठमाडौं, २९ माघ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू वर्षको बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि केही बढेको बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको मूल्यवृद्धि ६.२ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो…
ह्वात्तै घट्यो प्याजको मूल्य, प्रतिकेजी कति ?
काठमाडौं, २९ माघ। प्याजको मूल्य घटेको छ। प्याज प्रतिकेजी सय रुपैयाँ भन्दा तल झरेको छ। कुनै समय २ सय ५० रुपैयाँ रहेको प्याजको मूल्य अहिले घटेको हो। उपत्यकाकै सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा गत आइतबारदेखि प्रतिकेजी…
काठमाडौं। सुन एक दिनमा तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेको छ। हिजो (मंगलबार) प्रतितोला ७५ हजार ९ सयमा कारोबार भएको सुन आज (बुधबार) ७५ हजार ७ सयमा रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। निरन्तर उकालो लागेर प्रतितोला ७६ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको सुनको मूल्य…
कुखुराको मासुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, प्रतिकेजी कति ?
बागलुङ, २४ माघ। बागलुङमा ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। एक महिनाको अवधिमा तीन पटकसम्म मासुको मूल्यवृद्धि भएको मासु व्यवसायी सङ्घ बागलुङले जनाएको छ। जिल्लामा उत्पादन भएका ब्रोइलर कुखुराले बजारको माग धान्न नसकेपछि…
तरकारीमा परनिर्भरतादर बढ्यो
काठमाडौँ । देशमा तरकारीप्रतिको परनिर्भरतादर बढ्दै गएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आलुमा थप परनिर्भरता बढेको हो। बिहीबार भएको सुनुवाइमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा उपत्यकावासीको मागको ४० प्रतिशत…
सतहत्तरै जिल्लामा फोरजी सेवा सुरु
काठमाडौँ । देशका ७७ जिल्लाकै प्रमुख स्थानमा फोरजी सेवा सुरु भएको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा मङ्गलबार फोरजी जडान र परीक्षण सम्पन्न भएसँगै यसको पहुँच विस्तार ७७ ओटै जिल्लामा भएको हो । गत वर्ष माघ २० गते एक वर्षभित्र देशैभर फोरजी सेवा…
आकासियो लसुनको भाउ, प्रतिकिलो कति ?
काठमाडौं, २१ माघ। सरकारले नेपाल–चीन सीमाना बन्द गर्दा उत्तरी छिमेकबाट आयात हुने लसुनको आयातमा कमी आउनुका साथै यसको मूल्य पनि आकाशिएको छ। काठमाडौंमा लसुनको मूल्य प्रतिकिलो रू. २०० ले बढेको छ। काठमाडौंको बजारमा पुसको तेस्रो सातासम्म प्रतिकिलो…
काठमाडौं, २० माघ। सोमबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ७६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य नेपाली बजारमा सोमाबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो। यस्तै तेजावी सुन…
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो तोलाको ?
काठमाडौं, १६ माघ । नेपाली बजारमा बिहिबार सुन तोलामा ७ सय रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार प्रतितोला ७५ हजार ६ सयमा कारोबार भएको सुन बिहीबार ७६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । प्रतितोला ७६ हजार ५ सय…
काठमाडौं, १५ माघ। नेपाली बजारमा बुधबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको सुनको मूल्य केही समययता घटन् थालेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका अनुसार मंगलबार ७६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज ४…